China Ejiri Ogige Uhie Na Pir Sensor China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ejiri Ogige Uhie Na Pir Sensor - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ejiri Ogige Uhie Na Pir Sensor)
Ngwunye nke ìhè dị elu 20W nwere ihe mmetụta PIR
Ngwunye nke ìhè dị elu 20W nwere ihe mmetụta PIR N'ehihie, ihe nkedo dị elu 20W na anyanwụ ga-agbanye aka na-acha ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ mmiri na-acha ọkụ ọkụ 140 lumens na ụgwọ zuru ezu. Nke a dugara Solar Post n'elu 20W ga atụgharị na-akpaghị aka mgbe anyanwụ na-aga ala na uche anya mgbe...
Ìhè nke Ogige nwere ihe nrịba mmegharị maka ire 50W
Ihe Nnukwu Ihe Nnweta Ugbo 50w nkwado na-akwụkwụ poodu kwesiri ekwesi 2 3/8-inch OD tenon & 3 inch. E wezụga nke a, Ìhè Ọgba A na-ere na-akwado ntinye ọkụ dị na AC100-277V dị ugbu a, ma e jiri ya na 200W metal halide light bulbs, chekwaa ihe ruru 90% nke ụgwọ ọkụ eletrik. Igwe Ọkụ a nwere Sensor jiri IP65 mkpuchi...
Oriọna Mịnịstrị 30w Solar Panel
Igwe ọkụ Mkpo ọkụ nke 30w Solar Led na- abịa na mgbawa dị elu-lumen leds, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a dugara Solar Street nwere ike a uto atụgharị na n'abalị (inyoghi inyoghi mode), gbanyụọ na ala na-amalite na-ana. The Solar Panel Street Oriọna Post t on on na-egbuke...
Mbara Anyanwụ Street Lampị ọkụ na Sensor 30W
Igwe ọkụ ọkụ anyị nke 30w Solar Light Street na Sensor na- abịa na mgbawa dị elu-lumen leds, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a osisi Solar Street Light nwere ike a uto atụgharị na n'abalị (inyoghi inyoghi mode), gbanyụọ na ala na-amalite na-ana. The Battery Kwadoro Street...
Igwe ọkụ Solar Street Integrated na Motion Sensor 30W
Light 30w Solar Street Light anyị nwere mmetụta Mkpesa na-abịa na mgbawa ọkụ-lumen leds dị elu, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Integrated Street Light nwere ike uto gbanye n'abalị (ọnọdụ adịghị), gbanyụọ n'isi ụtụtụ wee malite ịgba ụgwọ. The Walmart Solar Street Light...
Light Light Parking na ọkụ ọkụ 30W
Anyị 30w Solar adọba ụgbọala na otutu Ìhè na-abịa na elu-lumen LEDs mgbawa, 30W nke Ikanam ike, na àjà ihe ọṅụṅụ-egbuke egbuke 3450Lm, 5000k, a oké arụmọrụ nke ìhè Nke a Solar Panel Street Light nwere ike a uto atụgharị na n'abalị (inyoghi inyoghi mode), gbanyụọ na ala na-amalite na-ana. The Solar Street Oriọna...
High ike Ikanam Chakwasa ihie 300w 130lm / w
Nke a na elu mmepụta High ike Ikanam Chakwasa ihie 300w 130lm / w nwere ọnụ nke 65,000lumens. The Ikanam Chakwasa ihie 300w 130lm / w High ike bụ ezigbo maka ọkụ n'elu nnukwu ámá egwuregwu, Arenas na egwuregwu ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka basketball n'ụlọikpe, tennis n'ụlọikpe na bọl ubi. Nnukwu ọkụ...
Ọkpụkpa oriọna LED ọka 100W 5000k 13000lm
Ọkpụkpa oriọna LED ọka 100W 5000k 13000lm Bbier 100W bu ọka ọka, igwe anaghị acha ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Ọka bọlbụ ìhè na-azọpụta n'elu 80% ụgwọ ọkụ site dochie 250W MH / HPS / zoo. Ndụ ndụ LED nke Led Corn Bulb USA karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, akwụkwọ ntụgharị agba dị elu. Igwe ọkụ 100w Led...
Mpụga Mbara Anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ 10W
Mbara Anyanwụ Mpụga n'èzí bụ ezigbo ihe ngwọta maka mkpa ọkụ ọkụ dịpụrụ adịpụ. Solọ Mbara Anyanwụ na-adọba ụgbọala Ndị Dị Mpempe Akwụkwọ eji maka ugboala, okporo uzo, okporo uzo na uzo di elu. Mbara Igwe Mbepụ Igwe ọkụ nwere ihe dị na mbara igwe na arụ ọrụ nke arụpụtara na batrị lithium na sistemụ na-enye steeti...
Ihu Igwe Na-achachi Anya Mmiri Mgbe Ugwu 500w
Nsonaazụ dị elu nke Ledepụtara 500w nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Oke ide mmiri na-enwu enwu na-enwu enwu dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ebe egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Ubochi Iju Mmiri a bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri....
Ìhè Na-enwu enwu na mpụga mgbachapụ ọkụ dị 400 Watt
Ìhè Igwe Ọdụdọ a Late 400 Watt nwere ọnụ ọgụgụ 52,000lumens. Ìhè Ìhè nke Ọwụwa Anyanwụ dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ebe egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ na-enwu enwu bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Ngwunye mgbanyụ ọkụ...
Ìhè Mpaghara Mpaghara Led na 400W 3000K
Nke a Lute 400w Iju Mmiri nwere ọnụ ọgụgụ 52,000lumens. Ìhè Ikpuchi Igha Ahụ 3000k dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Iju Mmiri Mpaghara Mpaghara nke Led bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Ìhè...
Igwe anaghị egbochi mmiri Ighalo na mmiri 500 Watt 65000LM
Nnukwu ọkụ a na-enwu n’Iji Mmiri 500w nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ìhè Ikpuchi Iche Efu 500 Watt dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Ìhè Na-egbochi Eleghị Ihu na Mmiri bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba...
Ejiri Light Bulbs 150w 120v 5000K
Ìhè Ìhè nke Ihu 150w anyị nwere ike ime ka ihe dị ọhụụ ruo 18000lm. Ngwurugwu Iju Mmiri a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Nke a Ighalo Ìhè Nke Udiri 120v ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi, ị nwere ike iwunye ya ihe ịchọrọ. Site na ntulee IP66, a na-eji ọkụ zeta butere ide mmiri na...
Ejiri Ogige Uhie Na Pir Sensor Ejiri Ogige Uhie na PIR Sensor Ejiri Ogige Uhie Na-acha Ejiri oghere na Motion Sensor Ogige Uhie Na-enwu Ogige Uhie 3900 Lumens 25N Ogige Uhie Na-enwu Uhie 50W Ogige Uhie Igwe Uhie